Tirada na soo booqday.	Maanta37145shalay31587Isbuucaan138109Isbuucii hore319617Bishaan895024Bishii hore985537Maalmaha oo dhan4713194Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 733 guests, 2 members Your IP: 50.17.109.248 , Today: May 22, 2013	Daawo Sawirada Roobab Mahiigaan ah Oo Ka Da'ay Galguduud.
Written by Maamul on 12 October 2012. Roobab mahiigaan ah ayaa ka da'ay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga Galguduud Liibaan Cali Nuur ma shahiiday? By: Eng. Khaliif Muumin
Written by Maamul on 12 October 2012. Shahaadada wadada Alle ayaa ah darajo sare iyo guul aan mid kale ka danbeyn; qofkii helana wuxuu noqonayaa Faroole iyo Xasan Sheekh Oo Isku dhegan.
Written by Maamul on 12 October 2012. Mid kamida Saxiixayaasha waxa loogu yeero Road-mapka ayaa ka biya diiday magacaabista R/wsaaraha cusub Weerar Baydhabo ka dhacay iyo Ciidanka Itoobiya oo Dhaq dhaqaaq wada.
Written by Maamul on 12 October 2012. Weeraro xoogan ayaa caawa lagu qaaday ciidamo Soomaali iyo Itoobiyaan ah oo ku sugan magaalada Baydhabo Kenya Oo Ka Been sheegtay Natiijada Khasaaraha dagaalka Jubbooyinka.
Written by gobal on 11 October 2012. Dowladda Wadanka ayaa markale ku hor kuftay Warbaahinta Caalamiga ah, kadib markii Wasaaradda Gaashaandhigga Maleeshiyaad ka tirsan DF oo gaari BL ah ku rasaaseeyey Magaalada Muqdisho.
Written by gobal on 11 October 2012. Saddex Ruux ayaa ku geeriyootay Saddex kalen way ku dhaawacmeen kadib markii maanta barqadii Maleeshiyaad Dagaal culus oo saaka ka dhacay deegaanka Kulbiyow.
Written by gobal on 11 October 2012. Dagaal culus ayaa saaka deegaanka Kulbiyow ee Wilaayada Islaamiga Jubooyinka ku dhexmaray Ciidamada Dadweynaha Muqdisho oo walaac ka muujiyay xaalad cabsi iyo argagax leh oo soo food saartay.
Written by gobal on 11 October 2012. Qaar ka mid ah dadweynaha Magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay xaalad Cabsi iyo qargagax leh Xasan Sheekh oo Musaveni ka dalbaday Ciidamo dheeraad ah inuu u soo diro Soomaaliya.
Written by gobal on 11 October 2012. Hogaamiyaha DF Xasan Sheekh oo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Ugandha kullan uu la qaatay Yuweri Sh. Xasan Yacquub Waaliga Cusub ee Galgaduud Oo Wareysigii Ugu horeyey Siiyey Idaacada Islaamiga Andalus Dhageyso.
Written by Maamul on 10 October 2012. Sh. Xasan Yacquub Cali oo dhawaan loo magacaabay Waaliga Wilaayada Islaamiga Galgaduud ayaa caawa wareysigii Cabdi Samad Macalim Maxamuud "Maqaayadda dib ayaan ufurnay qofkii Sambuus Iibsanaya waa labaarayaa".
Written by Maamul on 10 October 2012. Xilli amaanka magaalada Muqdisho uu faraha kasii baxayo ayay DF-ka sheegaysaa in ay sugayso ammaanka Mas'uul katirsan Maamulka Jigjiga Oo Buurhakaba lagu toogtay.
Written by Maamul on 10 October 2012. Faah faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa xukun shalay ka dhacay magaalada Buurhakaba ee wilaayada Haweeney raashiin gargaar ay doonatay darteed loo toogtay Caruurteediina loo geeyey Meydka Hooyadood oo raashiin doon ahayd.
Written by gobal on 10 October 2012. Wararka naga soo gaaraya Xaafada Soonakey Degmada Hodon ayaa sheegaya in Maleeshiyo ka tirsan DF halkaasi Sarkaal ka tirsanaa PS-ta oo caawa lagu dilay Xaafada Xamar Jadiid Degmada Wardhiigley.
Written by gobal on 10 October 2012. Weerar hubeysan oo caawa ka dhacay Xaafada Xamar Jadiid Degmada Wardhiigley ee Magaalada Muqdisho Askari ka tirsan Maleeshiyada DF oo Xaafada Suuqa Xoolaha lagu dilay.
Written by gobal on 10 October 2012. Kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa xalay dil toogasho ah ugu geystay xaafada Suuqa Xoolaha mid ka mid Ciidamo katirsan Mujaahidiinta Oo Kismaayo Dul Degay.
Written by gobal on 10 October 2012. Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee Wilaayada Islaamiga gobolada Jubooyinka ayaa sheegaya in Masuul ka tirsan DF oo isku day dil ka bad-baaday (Sigtaa ma noola).
Written by gobal on 10 October 2012. Fal dil ah oo xalay lala damacsanaa Guddoomiye ku xigeenka Arrimaha Bulshada Maamulka Degmada Afgooye Qafaalka dhalinyarada oo saaka ka socda Magaalada Muqdisho.
Written by gobal on 10 October 2012. Maleeshiyaadka DF ayaa saaka mar kale dib uga bilaabay xaafadaha Magaalada Muqdisho qafaalka dhalinyaradda Qarax khasaare lagu gaarsiiyey Maleeshiyaadka DF iyo kuwa Axmed Madoobe oo maanta ka dhacay Kismaayo.
Written by gobal on 09 October 2012. Wararka naga soo gaaray magaalada Kismaayo ee Wilaayada Islaamiga gobolada Jubooyinka waxay shegayaan Dagaal mar kale maanta ka dhacay duleedka Marka iyo baabuur lagu gubay.
Written by Maamul on 09 October 2012. Dagaal culus oo muddo soconayay ayaa maanta ka dhacay deegaanka Bilaal Ex-Buufow ee duleedka magaalada Maqaaxi ku taalla magaalada Gaarisa oo lagu kala cararay.
Written by Maamul on 09 October 2012. Maqaaxi ku taalla magaalada Gaarisa ee W/Bari Kenya ayaa lagu kala cararay ka dib markii la ogaaday Kismaayo oo khilaaf ka dhex riday Kenya iyo Uganda Written by Maamul on 09 October 2012. Qabaa’ilka dagaanka iyo maleeshiyaadka Soomaalida oo wali isku maan dhaafsan masiirka magaalada Kismaayo ay
Maleeshiyada DF oo ku badbaadi la wadooyinka iyo Suuqyada Muqdisho.
Written by gobal on 09 October 2012. Maleeshiyaadka DF magaalada Muqdisho ku sugan waxaa soo wajahday xaalad khatar dhanka amaanka ah, Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii xalay Mujaahidiinta Soomaaliya iyo Ciidamada Shisheeye ku dhexmaray Lafoole.
Written by gobal on 09 October 2012. Wararkii ugu dambeeyey dagaalladii xalay Mujaahidiinta Soomaaliya iyo Ciidamada shisheeye iyo Maleeshiyada Start«71727374757677787980»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan